MDC Alliance Inozivisa Zvakabuda Muongoro yeMabhuku Ayo eMari
MDC Alliance Audit
Bato reMDC Alliance rinoti ongororo rayo remabhuku emari egore ra2019 inoratidza kuti mari yakawanikwa inoita mamiriyoni matanhatu nemazana maviri ezviuru zvemadhora emunyika, kana kuti 6.2 million RTGS, yakafambiswa zvakanaka mubato iri.
MDC Alliance yati ongororo iyi yakaitwa neimwe kambani ine hunyanzvi mukutarisa mabhuku emari.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, mubati wehomwe, VaDavid Coltart, vati MDC Alliance inoshanda nemari inobva kune veruzhinji, uye sebato, vanokoshesa zvakanyanya kuzivisa kuti mari dzinenge dzakapiwa bato iri dzinenge dzakashandiswa seyi.
Munyori mukuru weMDC Alliance, VaChalton Hwende, vati kuongororwa kwemabhuku avo uku kunotevera chibvumirano chavakaita sebato chekuti vaongororwe mashandisirwo anoitwa mari mubato ravo.
VaHwende vatiwo aka ndekekutanga bato ravo richibudisa ongororo yakadai.
VaHwende vatiwo zvavaita izvi mucherechedzo wekuti vese vanoshandisa mari yeveruzhinji vanofanirwa kubudisa pachena mashandisirwo emari dzavanenge vapihwa kuitira kuti pasave nekufungirana.
VaHwende vati ongororo yemabhuku avo iyi yakanonoka kupera nekuda kwechirwere cheCOVID -19 izvo zvakambomisa mabasa ana mazvikokota vanoita basa iri.
VaHwende vatiwo kunyange hazvo MDC Alliance isisina mari yainowana kubva kuhurumende inopiwa mapato anopikisa pasi pe Political Parties Finance Act, zvichitevera kusawirirana neMDC T iri kufanotungamirwa naMuzvare Thokozani Khupe, bato ravo riri kuwana mari kubva kuvatsigiri varo izvo zviri kuita kuti vakwanise kuenderera mberi nemabasa avo zvinosanganisira kubhadhara vashandi vavo.
Vatiwo ongororo iyi inoratidza kuti hapana chakaipa chakawanikwa mukushandiswa kwemari yebato iri.
Mumwe mutsigiri weMDC Alliance, VaJeff Chaitezvi, vati vafadzwa nemaitiro ebato ravo anobudisa pajekerere kuti mari dziri kunoshandiswa sei.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira, VaMasimba Kuchera, vatiwo zvakanaka kuti mapato ezvematongerwo enyika abudise mafambiro emari dzavo kuitira kuti veruzhinji vave nechivimbo chekuti mari idzi dzinoshandiswa zvakafanira.
VaKuchera vatiwo kurudziro yavo ndeyekuti MDC Alliance irambe ichiita izvi gore rega rega.
Bato iri rinoti mugore ra 2019 rakawana mari inoita mamiriyoni matanhatu nemazana maviri ezviuru zvemadhora emunyika, kana kuti 6,2 million RTGS.
MDC Alliance ine matunhu gumi munyika, uye matunhu matatu akasimba ari kunze kwenyika anoti South Africa, North America Province neUnited Kingdom.